Globe valves waxaa lagu maamulaa lugo gacmeed waxayna sidoo kale xakameysaa wareegga biyaha. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale abuuraan cadaadis lumis weyn. Doorashada waalka saxda ah waa lagama maarmaan, maaddaama noocyada kala duwan ay leeyihiin shaqooyin kala duwan iyo sidoo kale adeegsiyo. Qaar ka mid ah ...
Waa maxay Baadhitaanka Hubinta?
Baadhitaannada hubinta ayaa guud ahaan lagu rakibay dhuumaha si looga hortago dib u soo noqoshada. Baadhitaanka jeeggu asal ahaan waa waalli hal-waddo ah, qulqulka ayaa si xor ah ugu socon kara hal jiho, laakiin haddii socodka qulqulo, waalka waa la xidhi doonaa si loo ilaaliyo dhuumaha, ...
Talooyinka Dayactirka Iyo Dayactirka Balanbaalis Madax
Waalka balanbaalisku waa nooc ka mid ah qalabka nidaaminaya socodka, kaas oo ay ku jiraan saxanka wareegaya si uu ugu shaqeeyo dareeraha socodka. Mawqifka taagan ee waalka balanbaalisku, waxaa ku jira qalab bir ah oo ku shaqeeya xiritaanka ...